सानेपा हत्या प्रकरण : फोडिएको अवस्थामा पाइयो स्टिलको दराज, के लुट्नकै लागि भयो सत्यनारायणको हत्या?
4th July 2021, 08:00 pm | २० असार २०७८
शुक्रवार बिहानैदेखि परिरहेको पानी रोकिएको थिएन। उपत्यकाभित्र जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपनि झरीकै कारण सत्यनारायण घरबाट निस्किन पाएका थिएनन्। राति करिब साढे ८ बजे अचानक उनको मोबाइलको घण्टी बज्यो। स्क्रिनमा परिचित नाम र नम्बर देखिएकाले उठाउन कुनै सन्देह भएन।
फोन गरेकी थिइन् उनका लागि काम गर्ने महिलाले। कारणबस् शनिवार बिहान आफू काम गर्न नआउने जानकारी दिइन्। शनिवार साँझ मात्र आउने बताएपछि सहमतिमा कुरा टुंगियो।
उमेरले ५९ वर्षीय सत्यनारायण पारिख ललितपुरको सानेपामा बस्थे, १३ वर्षदेखि कोठा भाडामा लिएर। ललितपुर-२ सानेपास्थित राम मन्दिरबाट करिब ४ सय मिटरको दूरीमा छ उनी बस्ने घर। मन्दिरको दाहिनेतिर पर्ने गोरेटो बाटोको दुई घर पर। बाक्लो बस्ती। एउटा घर अर्को घरसँग जोडिएका छन् त्यहाँ। उनको स्थायी घर भने भारतको राजस्थान हो।
शनिवार बिहानैदेखि असारे झरी केही साम्य भएको थियो। दिउँसोबाट मौसम खुलेपछि ती महिला आफ्नो काम सकेर सत्यनारायण बस्ने घरमा पुगिन्। ४० वर्षीया ती महिला सत्यनारायणको घरमा नियमित काम गर्दै आएकी थिइन्। तर, हरेक शनिवारभन्दा अस्वभाविक थियो अवस्था।गेटमा बाहिरैबाट ताल्चा लगाइएको थियो। सत्यनारायणको मोबाइलमा फोन गरिन्। फोन गयो तर उठेन। उनी त्यहाँबाट निस्किइन्।
आइतवार बिहान उनी फेरि सत्यनारायणको घरमा पुग्छिन्। फेरि उस्तै दृश्य दोहोरिन्छ। छिर्नुपर्ने गेट बन्द, मोबाइल उठ्दैन। यस पटक घरभित्र टिभी बजेको आवाज सुनिन्छ। झ्याल खुल्ला। कोठामा बत्ती पनि बलिरहेकै हुन्छ। शनिवारदेखि नै उनको मनमा केही शंका पलाएको थियो। शंका चुलिएपछि भने ती महिलाले सत्यनारायणको परिवार र अन्य मानिसलाई फोन गर्छिन्।
खबर प्रहरीसम्म पुग्छ।
बिहानै प्रहरी सत्यनारायणको कोठामा पुग्छ। छिमेकीको घर माथिबाट खुला झ्यालसम्म पुग्छ र भित्र छिर्छ। कोठामा छिरेर हेर्दा सत्यनारायण मृत अवस्थामा भेटिन्छन्।
करिब एक वर्षअघि सत्यनारायण दुर्घटनामा परे। नेपालटारमा कामको सिलसिलामा बाटोमा खुट्टा चिप्लिएर उनी घाइते भए। खुट्टा व्यान्डेज गर्नु पर्‍यो। लकडाउनको बेला खुट्टामा चोट लागेपछि उनको घरको कोठा नै कार्यालय बन्यो।
सत्यनारायणको एक छोरीको विवाह भइसकेको छ। श्रीमती बितेको ८ वर्ष भयो। त्यसैले अहिले उनी एक्लै कोठामा बस्दै आएका थिए। उनी बस्ने घरमा अरू कोही बस्दैनन्। साढे २ तले घरमध्ये भुईं तला खाली छ। भाडामा बस्न कोही नआएको धेरै महिना भइसकेको छ। त्यहाँदेखि माथि दोस्रो तलामा उनको भान्छा र सुत्ने कोठा छ। माथिल्लो तलमा उनकै अन्य सामानहरू राख्ने गरेका छन्।
सत्यनारायण न्यूरोडको एटलान्टिक कम्प्युटर कम्पनीमा सेल्सम्यान थिए। त्यहाँ काम गर्न थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ।
जाली काटिएको झ्याल
‘उहाँ घरबाट नै काम गर्नुहुन्थ्यो। खुट्टा फ्याक्चर भएपछि घरबाट नै फोनमार्फत् काम गर्नुहुन्थ्यो,’ कम्पनीका कर्मचारी प्रकाश ठाकुरले भने।
सत्यनारायण सेल्सम्यान थिए। तलब ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि नै थियो।
घरमा एक्लै भएकाले उनले काम गर्ने मानिस राखेका थिए। अर्की एक जना २०/२५ वर्षीय युवती समेत उनको घरमा काम गर्थिन्। सत्यनारायणका भाइ पनि काठमाडौंमा नै बस्दै आएका छन्। असार १७ गते दिउँसो ३/ ४ बजेतिर दाइसँग कमलपोखरीमा अन्तिम भेट भएको उनको भाइ संजयले बताएका छन्।
दाइ जिद्दी स्वभावको भएकाले आफूसँग धेरै सम्पर्क नहुने उनको भाइले प्रहरीसँग बताएका छन्।
हरियो रङले पोतिएको कोठा। सुत्ने खाँटमाथि भगवानको ठूलो तस्बिर राखिएको छ। सँगै स्टिलको दराज। घरको पहिलो तलामा भएको सत्यनारायणको बेडरुममा घोप्टो परेको अवस्थामा फेला परेका थिए उनी आइतवार। तल पट्टी खैरो रंगको हाफ पाइन्ट। टाउको ब्लाङ्केट भित्र। लुगाहरू छरपस्ट अवस्थामा थियो। बत्ती बलिरहेकै थियो। टिभी चालु। कोठामा रगतको आहाल।
पोष्टमार्टमको लागि शव अस्पताल लगिदैं
कोठामा रहेको स्टिलको दराज फोडिएको छ। सामान खदालखुदुल छ। उनले प्रयोग गर्ने दुई वटै मोबाइल त्यहीँ छन्। एउटा अलिक फुटेको जस्तो छ। वालेट पनि मृत शरीरसँगै छ। घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा उनको हत्या नै भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
घटनास्थल नजिकै हम्मर फेला पर्‍यो। शरीरमा पनि प्रहारको दाग। त्यसैले पनि प्रहरीले हत्याको अनुमान गरिरहेको छ।
‘हम्मर र शरीरमा प्रहार गरेको हेर्दा हत्या भएको देखिएको छ। तर, हत्या किन र कसले गर्ने भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धानमा नै छौँ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी एसएसपी किरण बज्राचार्य भनिन्।
यदी हत्या नै भएको भए घरभित्र मानिस कसरी प्रवेश गरे त?
प्रहरीको अनुसन्धानमा कोही मानिस झ्यालबाट छिरेको देखिएको छ। झ्यालमा फलामको ग्रिल छैन। सिसाको फ्रेम भएको झ्याल र त्यसमा लामखुट्टे छेक्न लगाएको जाली छ। सिसाको झ्याल खुलेको देखिन्छ। जाली च्यातिएको छ।
‘मानिस झ्यालबाट छिरेको खुट्टाको डाम जस्तो देखिएको छ। त्यस्तै झ्यालको जाली च्यातिएको छ,’ एसएसपी बज्राचार्य भनिन्।
घटनास्थल पुगेर फर्किदै एसएसपी किरण बज्रचार्य
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले चोरी र त्यसपछि हत्या भएको देखाएको छ। दराज फोडेर सामान चलाइएको छ। त्यस्तै, माथिल्लो तलमा रहेको दराजमा पनि सामान चलाएको देखिएको छ। घटना रातिको समयमा हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर समेत प्रयोग गरेको थियो। कुकुर पटक पटक घरको अर्को गल्तीतिर गएको थियो। प्रहरीले अहिले कुकुरले दिएको संकेतको आधारमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सत्यनारायणको हत्या कसले र किन गर्‍यो भन्ने प्रश्नको अनुसन्धानमा प्रहरी लागिरहेको छ।